छोरीले मोबाईलबाटै यस्तो ह’र्कत गर्दा आमाबुवाको हो’स नै उ’ड्यो ! – Jagaran Nepal
छोरीले मोबाईलबाटै यस्तो ह’र्कत गर्दा आमाबुवाको हो’स नै उ’ड्यो !
त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाʼहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिʼएका थिए’नन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई बल्ल थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिर’हिछिन् । छोʼरीको कार्यले उनीहरुको होʼसहवा’स उडेको छ ।घटना चीनको हुबेइ प्रान्तको जिंगझोउ सहरको हो ।
यसको पैसा तिर्नको लागि उनले आमासँग बैंकको पिन कोड मागिन् । त्यसपछि भने उनलाई बैंकको पिन याद रहन्थ्यो । विस्तारै उनले पुरानो फोनमा इन्टरʼनेटमा’र्फत लाइभ स्ट्रिमिʼङ शो हेर्न थालिन् ।यस्ता शोʼहरु हेर्न पैसा तिर्नु’पथ्र्यो । उनले आमाʼबुवाको बैंक खाताको पिन नम्बर प्रयोग गरेर बैंकबाट पैसा तिर्दै शो हेर्न थालिन् । यस्ता शो हेर्न उनले मोटो रकम फोʼनबाटै तिर्न थालिन् ।
पुरानो फोʼनमा पैसा तिरेको नोटिफि’केशन आउँदैनथ्यो त्यसैले मातापि’ताले यति ठूलो रकम खर्च भएको थाहा पाएनन् । करिब ६ महिनापछि मातापिताले आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा बल्ल खाताबा’ट १७ लाख रुपैयाँ बे’पत्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि चिङ्ले प्र’हरीमा रिपो’र्ट लेखाउँदै एक जना कानु’न व्यवसा’यी पनि लिʼएका छन् ताकि यो पैसा फिर्ता पाउन सकि’योस् ।
यससम्बन्धि विज्ञका अनुसार चिङ्ले यो पैसा फि’र्ता पाउन सक्छिन् तर यसका लागि उनले प्रमाणित गर्नुपर्छ कि यो रकम उनकी नाबालिका छोरीले नै खर्च गरेकी हुन् । वयस्क’ले खर्च गरेकोमा भने यो रकम फिʼर्ता आउँदैन । जनबोली बाट तस्बिर:सान्केतिक प्रयोगको लागि